Bayaanka CIRC: Maxkamada Sare waxay la safan tahay qaatayaasha DACA, Bixinta Gargaarka Dhallinyarada Muhaajiriinta ah iyo Qoysaskooda - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Press Release > Bayaanka CIRC: Maxkamadda Sare waxay la safan tahay qaatayaasha DACA, oo u fidisa gargaar dhalinyarada soo galootiga ah iyo qoysaskooda
Taariikhda: 6 / 18 / 2020
Go'aankani wuxuu ku nuuxnuuxsaday in DACA ay sax tahay, iyo in dadka qaata DACA iyo qoysaskooda: gurigu waa kan.
Washington, DC - Maanta, Maxkamadda Sare waxay ku dhawaaqday xukun 5-4 ah oo ku saabsan dacwadaha barnaamijka Dib-u-dhigga loogu talagalay Imaatinka Carruurnimada (DACA), iyada oo xukuntay in go'aanka Trump ee ka noqoshada barnaamijka DACA uu ahaa mid aan macquul ahayn oo xamaasad leh. Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado wuxuu qaban doonaa shir-jaraa'id dal-qabad ah oo uu kaga jawaabayo wararka soo dhacaya: Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) - oo matalaya 90+ urur oo ku baahsan gobolka - ayaa sii daayay bayaanka soo socda iyo la-talinta warbaahinta:
“Guusha maanta waxay ka tarjumaysaa natiijada shaqo adag ee ay si toos ah u saameeyeen bulshooyinka si ay ugu doodaan naftooda una dalbadaan isbeddel. Maanta, Maxkamadda Sare waxay la safatay dadka Mareykanka iyo aqlabiyadda reer Coloradans yaa si weyn u taageera barnaamijka DACA oo aamin Dadka qaata DACA waa inay lahaadaan qaab ay ku kasbadaan muwaadinimo - wuuna diiday qorshihii kala qaybinta iyo nacaybka ahaa ee madaxweyne Trump. Go'aankani wuxuu ilaalin doonaa nolosha iyo hab-nololeedka dadka 14,500 Qaadanayayaasha DACA ee Colorado iyo 28,000 oo ka tirsan qoysaskooda oo ka yimid naxariis darada Madaxweynaha - ugu yaraan hadda.
Tan iyo markii uu Trump xafiiska la wareegay oo uu buriyay DACA bishii Sebtember ee 2017, dhalinyarada soo galootiga ah, qoysaskooda iyo xulafadooda dalka oo dhan waxay u dagaallamayeen ilaalinta DACA. In kasta oo go'aankani uu bixinayo gargaarka loo baahan yahay ee loogu talagalay dadka qaata DACA iyo qoysaskooda, soogalootiga wali waxaa weeraraya maamulkan.
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado wuxuu ugu baaqayaa Trump inuu ballanqaado inuu ixtiraamayo go’aanka Maxkamadda Sare oo uusan isku dayin inuu markale barnaamijka soo afjaro. Waa inuu sidoo kale amraa USCIS inaysan la wadaagin macluumaadka ICE ee ku saabsan dadka qaata DACA iyo qoysaskooda. Maamulka Trump wuxuu caddeeyay inay doonayaan inay masaafuriyaan dad badan intii suurtagal ah, iyagoo lacag uga raraya hay'adaha kala duwan ee dowladda una wareejinaya ICE si ay ugu fuliyaan ajandahooda masaafurinta badan.
Markaan u dabaaldegeyno maanta, waxaan sidoo kale qireynaa inta dagaal ee isbeddelka weli ay tahay in la qabto. Go'aankani wuxuu daba socdaa toddobaadyo abaabul geesinimo iyo mudaaharaadyo ka socda dadka Madow iyo xulafada waddanka oo dhan si loo dalbado in la joojiyo naxariis darrada booliska, sarraynta caddaanka iyo baaq loogu soo horjeedo booliiska. Waxaa naga go'an inaan la dagaallano nidaamyada loo dhisay in lagu bartilmaameedsado, la xiro oo la masaafuriyo soogalootiga kuwaas oo salka ku haya nidaamyada cunsuriyadda ka soo horjeedka Madow iyo sarreynta caddaanka
Dagaalka loogu jiro joojinta sarreynta cad iyo u doodista nolosha Madowga, iyo ilaalinta muhaajiriinta oo dhan waa mid ay tahay inaan si wadajir ah u qabanno. ”
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado wuxuu qaban doonaa shir-saxaafadeed casri ah oo uu kaga jawaabayo wararka soo dhacaya:
WHO: Dadka qaata Colorado DACA, Garyaqaan Christina Uribe Reyes oo ka socota Uribe Reyes Law, Padres & Jóvenes Unidos, Tiyaatarka Motus iyo Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
WAA MAXAY: Shirka jaraa'id ee loogu talagalay dadka qaata DACA si ay uga falceliyaan wararka iyo qareenka socdaalka si uu u sharaxo waxa go'aanka loola jeedo.
GOORMA: MAANTA 11am - fadlan iska qor halkan waxaadna heli doontaa macluumaad ku saabsan sida loogu biiro e-mayl.
HALKEE: Via Zoom - fadlan iska qor halkan waxaadna heli doontaa macluumaad ku saabsan sida loogu biiro e-mayl.
WAA MAXAY SABABTA: Maxkamadda Sare waxay ku dhawaaqday xukun 5-4 ah oo ku saabsan dacwadaha barnaamijka Dib-u-dhigga loogu talagalay Imaatinka Carruurnimada (DACA), iyadoo xukuntay in go'aanka Trump ee ka noqoshada barnaamijka DACA uu ahaa mid aan macquul ahayn oo xamaasad leh.
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) waa isbahaysi goboleed ku saleysan xubinnimada muhaajiriinta, caqiidada, shaqada, dhalinyarada, bulshada, ganacsatada iyo ururada isbahaysiga oo la aasaasay 2002 si loo wanaajiyo nolosha muhaajiriinta iyo qaxootiga iyadoo laga dhigayo Colorado gobol soo dhaweyn, soogalooti saaxiibtinimo leh.